HIBRU 4 - Baịbụl Nsọ [Igbo Bible 1988] - (HI 4)
Ma nkwa dịkwara anyị ugbu a ịbanye ndụ ebighị ebi, ebe izuike nke Chineke. Ya mere, ka anyị lezie anya nke ọma, ka a hapụ ịchọta onye ọ bụla nꞌetiti anyị nke na-agaghị abanye.
E kwusaalara anyị ozi ọma a. Ha onwe ha nụkwara ya. Ma ozi ọma ahụ ha nụrụ enyereghị ha aka. Nꞌihi na ha ejighị okwukwe nara ya, ha egekwaghị ntị.
Anyị maara na Chineke ejikerela ugbu a na-eche anyị. Akwụkwọ nsọ kpugheere anyị nke a site nꞌụbọchị asaa nke okike. Nꞌụbọchị nke asaa Chineke zuru ike site nꞌọrụ ya.
Ma nꞌebe ọzọ, Chineke kwuru okwu banyere ụfọdụ ndị Juu a sị “Ha agaghị aba nꞌebe izuike m.”
Nꞌihi nke a anyị na-ahụ na ozuzu ike dị nꞌihu nye ụfọdụ. Ọ bụ ezie na ndị mbụ nụrụ ozi ọma a abanyeghị nꞌebe izuike ahụ. Ha abanyekwaghị nꞌihi na ha erubeghị isi nꞌokwu Chineke site na-ekweghị ekwe ha.
Nꞌoge gara aga, Joshua nyeere ụmụ Izirel aka ịchọta otu ụdị ezumike. Ma ala ahụ Chineke kwere ha na nkwa enyezughị ha ezumike zuru oke. Nꞌihi na a sị na ezumike ahụ zuru oke, Chineke agaraghị ekwukwa okwu banyere ụbọchị ọzọ.
Nke a na-egosi anyị na ndị Chineke nile na-ele anya ezumike zuru oke nꞌebe Chineke nọ, ezumike ga-adị ka ezumike Chineke nꞌụbọchị nke asaa.
Nꞌihi na onye ọ bụla banyere nꞌezumike Chineke esitela nꞌọrụ nwee izuike, dị ka Chineke siri banye nꞌizuike nke ya mgbe o kechara ihe nile.
Ọ dịghị ihe ọ bụla nꞌime ihe nile e kere eke pụrụ izo onwe ya site nꞌebe Chineke nọ. Ihe nile ghere oghe, gbara ọtọ nꞌihu anya ya. Ọ bụ nꞌihu ya ka anyị nile ga-aza ajụjụ banyere ndụ anyị nile.